चितवनमा दुई लाइन्स क्लब द्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग • Health News Nepal
चितवन , २३ जेठ २०७८
भरतपुरस्थित लायन्स क्लब अफ चितवन चौतारी र लायन्स क्लब अफ चितवन नवलपुर समृद्धिले कोरोना भाइरस बिरुद्ध स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेका छन ।
शनिवार नवलपुरको गैंडाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रमा गैंडाकोट नगरपालिका मार्फत हुने गरि दुई ओटा अक्सिजन कन्सनटेटर र सेनिटाइजर हस्तान्तरण गरिएको हो।
अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन र चितवनका दुई क्लबको आर्थिक सहयोगमा उपलब्ध उक्त स्वास्थ्य सामाग्री लायन्स क्लब अफ चितवन चौतारीका अध्यक्ष डा. गंगा सापकोटाले गैंडाकोट नगरपालिका मार्फत हुने गरि हस्तान्तरण गरेका हुन।
नगरका मेयर मेयर छत्र राज पौडेल र उप मेयर बिष्णु कुमारी कंडेलले संयुक्त रुपमा सामाग्री बुझेका हुन। कार्यक्रममा मेयर पौडेलले लायन्स क्लबहरुले कोभिडको महामारीमा धेरै सहयो गरेको भन्दै धन्यवाद दिए।
यस्तै उक्त दुई क्लबले बाग्लुङको जैमुनी नगरपालिकालाई एउटा अक्सिजन कन्सनटेटर , मास्क, पिपिइ लगायतका सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
कार्यक्रममा लायन्सका डिडिसि भक्ती प्रसाद चालिसे ,जोन चेयर पर्सन बिनोद पन्त, डा. महेन्द्र अग्रहरी लाल प्रसाद शर्माको उपस्थित रहेको थियो। यस्तै गैंडाकोट ५ का अध्यक्ष नवराज कंडेल र नगर स्वास्थ्य प्रमुख प्रकाश पोखरेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
Tags: CooperationCorona Virus #Covid19Health equipmentLions club Chitwan